Ny beta ampahibemaso faharoa an'ny tvOS 11.4 dia efa misy | Avy amin'ny mac aho
Androany dia namoaka ny kinova beta ho an'ny mpamorona macOS High Sierra 10.13.5 i Apple ary namoaka ny kinova beta ampahibemaso an'ny tvOS 11.4 sy iOS 11.4. Ireo kinova beta ireo dia manampy zavatra mitovy ihany izay nampiana tao amin'ny kinova beta developer ary ataon'ny Apple ho an'ny mpampiasa voasoratra anarana izy ireo.
Amin'ity tranga ity, ny kinovan'ny tvOS 11.4 beta 2 dia manampy toa ny kinova voalohany zava-baovao iray nisongadina, AirPlay 2. Amin'io lafiny io, ny fanatsarana mahazatra ao amin'ny rafitra, ny fanitsiana bibikely sy ny vahaolana amin'ireo olana voalaza ao amin'ny beta ho an'ny daholobe voalohany, natomboka tamin'ny fiandohan'ity volana ity, dia nampiana.
AirPlay 2 no zava-baovao lehibe
Na eo aza ny hany zava-baovao miova amin'ny tvOS 11.4, ny marina dia tsy voadio tanteraka ny lahasa AirPlay 2 ary mila miasa bebe kokoa amin'izany ianao. Raha ny tena izy dia nampiharina tao amin'ny tvOS 11.3 ary voatery nisotro ronono noho ny olana amin'ny fandidiana dia toa mandeha tsara daholo izao fa tsy maintsy vitaina ny famolahana.
Azontsika jerena indray eto amin'ireto kinova ireto fa tsy misy fiovana lehibe amin'ny estetika na fiasa, ity dia zavatra efa nampitandreman'i Apple fa hitranga ary mitranga izany. Raha ny marina ny fanatsarana nampiharina tamin'ireny beta ireny dia mifandraika amin'ny fahombiazan'ny tvOS, zavatra efa nataon'izy ireo efa ela ary toa mandeha izany satria vitsy ny lesoka hitantsika amin'ny fiasan'ny Apple TV.
Tokony ho tsaroana fa ny fisoratana anarana mba ho afaka maimaimpoana tanteraka ny fametrahana kinova ho an'ny daholobe Ary tsy misy kaonty mpamorona takiana, eny, mampiharihary ny tenanay amin'ny loza mety hitranga amin'ny fametrahana kinova beta amin'ny Apple TV izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Efa misy ny beta ho an'ny daholobe faharoan'ny tvOS 11.4